Samsung ga -eji eserese AMD Radeon maka ekwentị ya | Androidsis
Nkwekọrịta dị mkpa na Samsung ekwuputala ọkwa. Na nkwupụta nkwonkwo ya na AMD, akara Korea gosipụtara na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ. N'ụzọ dị otú a, ebumnuche bụ ịnye nyiwe Exynos na teknụzụ nke AMD Radeon mepụtara. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ kaadị mbinye aka na smartphones site na onye nrụpụta Korea.
Otu n'ime ihe kpatara ya bụ Samsung chọrọ ime ka ọdịiche ahụ dị na Adreno GPUs karịa Qualcomm jiri ndị nhazi gị. Ya mere, akara nke Korea na otu n'ime ndị mmekọ kachasị mma ọ nwere ike ịchọta n'ọhịa a. Ha nwere ike ime usoro dị ịrịba ama na mpaghara a na ekwentị ha.
O bu akuko di iche na nke ozo edeputara ogologo oge gara aga, mgbe ekwuru ya Samsung ga-emepụta GPU nke ya. Companylọ ọrụ ịkụ nzọ ugbu a maka mmekorita ya na AMD. Site na nkwekọrịta a, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ikikere kaadị eserese IP site na AMD ma lekwasị anya na teknụzụ eserese dị elu na ngwọta.
Maka oge ahụ anyị amaghị mgbe anyị ga-ahụ nsonaazụ mbụ nke mmekorita a n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ. Fọdụ na-eche na Galaxy S11 ga-abụ ihe izizi izizi iji gosipụta AMD GPU. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ndị ọzọ na-ekwu na anyị ga-echere ruo 2021.
Ka o sina dị, ọ bụ usoro nkwado nke Samsung, iji tinye arụmọrụ kacha mma na ekwentị ha. Ihe di oke nkpa ma oburu na ichoro m ekwentị gị na-n'ụzọ zuru ezu kachasị maka egwu egwuregwu, nke bu otu n'ime ochicho nke onye mmeputa Korea taa. Nkwekọrịta a ga-enyere ha aka inweta ya.
N'ezie ọnwa ole na ole sochirinụ ga-abịakwute akụkọ banyere ya mmekota a n'etiti Samsung na AMD ma n'ụzọ dị otú a mara ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị ọhụrụ nke ụdị Korea. Ya mere, anyị ga-ege ntị na akụkọ ga-abata site ugbu a gaa n'ihu. Kedu ihe ị chere gbasara nkwekọrịta a dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung ga-eji AMD Radeon eserese na ekwentị ya